Samuel Nhoma a Edi Kan 16:1-23
Samuel sraa Dawid sɛ ɔno na obedi hene (1-13)
“Yehowa de, ɔhwɛ komam” (7)
Onyankopɔn honhom fii Saul so (14-17)
Dawid bɛyɛɛ obi a ɔbɔ sanku ma Saul (18-23)
16 Akyiri yi, Yehowa ka kyerɛɛ Samuel sɛ: “Wubedi Saul ho awerɛhow akosi da bɛn,+ bere a mapo no sɛ onnni Israel so hene bio no?+ Fa ngo gu abɛn mu+ na sim kɔ, na meresoma wo akɔ Betlehemni Yese+ nkyɛn, efisɛ mapaw ɔhene wɔ ne mma mu.”+ 2 Ɛnna Samuel kae sɛ: “Mɛyɛ dɛn akɔ? Sɛ Saul te a, obekum me.”+ Yehowa ka kyerɛɛ no sɛ: “Fa nantwi ba na kɔ, na ka sɛ, ‘Maba sɛ merebɛbɔ afɔre ama Yehowa.’ 3 Na frɛ Yese bra afɔrebɔ no ase, na mɛkyerɛ wo nea wobɛyɛ. Onii a mɛkyerɛ wo no, ɔno na sra no ma me.”+ 4 Samuel yɛɛ nea Yehowa kae no. Bere a oduu Betlehem+ a kurow no mu mpanyimfo huu no no, wɔn ho popoe, na wobisae sɛ: “Wobaa no asomdwoe mu anaa?” 5 Ɛnna ɔkae sɛ: “Ɛyɛ asomdwoe mu. Maba sɛ merebɛbɔ afɔre ama Yehowa. Montew* mo ho na mo ne me nkɔ afɔrebɔ no ase.” Na ɔtew* Yese ne ne mma no ho, na ɔfrɛɛ wɔn baa afɔrebɔ no ase. 6 Bere a wɔbae a ohuu Eliab+ no, ɔkae sɛ: “Ampa, nea Yehowa asra no no na ogyina n’anim yi.” 7 Nanso Yehowa ka kyerɛɛ Samuel sɛ: “Nhwɛ sɛnea ɔte ne ne tenten,+ na mempɛ no. Ɛnyɛ sɛnea onipa hwɛ ade na Onyankopɔn hwɛ, efisɛ onipa dasani hwɛ nea etua aniwa, na Yehowa de, ɔhwɛ komam.”+ 8 Na Yese frɛɛ Abinadab+ ma obetwaam wɔ Samuel anim, na ɔkae sɛ: “Oyi nso Yehowa mpaw no.” 9 Afei Yese maa Samma+ nso betwaam, nanso ɔkae sɛ: “Oyi nso Yehowa mpaw no.” 10 Enti Yese maa ne mma mmarimma baason betwaam Samuel anim, nanso Samuel ka kyerɛɛ Yese sɛ: “Yehowa mpaw eyinom mu biara.” 11 Ɛnna Samuel bisaa Yese sɛ: “Wo mma mmarimma no nyinaa ni anaa?” Na ɔkae sɛ: “Akumaa koraa no+ nni ha bi; ɔde nguan kɔ adidi.”+ Ɛnna Samuel ka kyerɛɛ Yese sɛ: “Soma ma wɔnkɔfrɛ no mmra, efisɛ yɛrentena ase nnidi gye sɛ waba ansa.” 12 Enti ɔsoma kɔfrɛɛ no bae. Ná ɔbere, na na n’aniwa mma yɛ fɛ, na ne ho nso yɛ fɛ.+ Ɛnna Yehowa kae sɛ: “Sɔre sra no, na ɔno ara ni!”+ 13 Enti Samuel faa abɛn a ngo wom no,+ na ɔsraa no wɔ ne nuanom mu. Na efi saa da no rekɔ no, Yehowa honhom baa Dawid so.+ Akyiri yi, Samuel sɔre siim kɔɔ Rama.+ 14 Afei Yehowa honhom fii Saul so,+ na Yehowa maa honhom bɔne bɛhaw no.+ 15 Saul nkoa ka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ, Onyankopɔn ama honhom bɔne rehaw wo. 16 Yɛn wura, yɛsrɛ wo, ma wo nkoa a wɔwɔ w’anim yi nkɔhwehwɛ obi a onim sanku bɔ paa,+ na sɛ Onyankopɔn ma honhom bɔne no ba wo so a, wabɔ ama wo ho atɔ wo.” 17 Enti Saul ka kyerɛɛ ne nkoa no sɛ: “Mesrɛ mo, monkɔhwehwɛ obi a onim sanku bɔ paa mmrɛ me.” 18 Na n’asomfo no mu baako bɛkae sɛ: “Hwɛ! Mahu Betlehemni Yese ba bi a onim bɔ paa; ɔyɛ ɔbarima katakyi a ɔwɔ akokoduru.+ N’ano atew, ne ho yɛ fɛ,+ na Yehowa nso di n’akyi.”+ 19 Ɛnna Saul somaa abɔfo kɔɔ Yese hɔ sɛ: “Ma wo ba Dawid a ɔhwɛ nguan no mmra me nkyɛn.”+ 20 Enti Yese faa paanoo, kotoku* a bobesa wom, ne apɔnkye ba, na ɔde sii afurum so de maa ne ba Dawid sɛ ɔmfa nkɔma Saul. 21 Na Dawid baa Saul nkyɛn bɛsom no.+ Saul bɛpɛɛ n’asɛm paa, na ɔbɛyɛɛ ne somfo a okura n’akode. 22 Saul soma ma wɔkɔka kyerɛɛ Yese sɛ: “Mesrɛ wo, ma Dawid ntoa so nsom me, na wanya m’anim dom.” 23 Enti sɛ Onyankopɔn ma honhom bɔne no ba Saul so a, na Dawid afa sanku no abɔ. Ɛba saa a, na Saul ho atɔ no, na n’asom adwo no, na honhom bɔne no afi no so kɔ.+
^ Anaa “Munnwira.”
^ Anaa “odwiraa.”